Beth Malone: အဖေ့ရဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရောဂါက ကျွန်မရဲ့ မရဏ (နှင့်ဘဝ)​ အတွေးအခေါ်ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပုံ။ - English-Video.net
Beth Malone: အဖေ့ရဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရောဂါက ကျွန်မရဲ့ မရဏ (နှင့်ဘဝ)​ အတွေးအခေါ်ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပုံ။
နွေးထွေးမှု၊ ကျက်သရှိမှုနဲ့အတူ Beth Malone ကနေပြီး သူမအဖေရဲ့ နားထင်ရှေ့ဖက်ပိုင်း ဦးနှောက်ထိခိုက် ဒဏ်ရာနဲ့ ရုန်းကန်ရမှု ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဇာတ်လမ်းနဲ့ မရဏ (နဲ့ဘဝ) အကြောင်း သူမတွေးထင်ပုံကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲခဲ့ပုံကို လေးနက်စွာ ပြောပြထားပါတယ်။ သမီးတစ်ဦးရဲ့ ချစ်မေတ္တာနဲ့ စိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေခြင်းအကြောင်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဟောပြောချက်တစ်ခုပါ။
I'm going to kill my dad.
ကျွန်မ အဖေကို သတ်တော့မလို့။
ကျွန်မ အမကို ခေါ်လိုက်တယ်
I'm going to kill Dad.
I'm going to take him to Oregon,
သူ့ကို Oregon ကို ခေါ်သွားမယ်၊
find some heroin,
My dad has frontotemporal lobe dementia,
အဖေ့မှာနားထင်ရှေ့ဖက် ဦးနှောက်ထိခိုက် ဒဏ်ရာ
(သို့) FTD ရှိပါတယ်။
It'saconfusing disease
that hits people in their 50s or 60s.
ဒါက အသက် ၅၀၊ ၆၀ ကျော် လူတွေကို
ဖြစ်စေတဲ့ စိတ်ရှုပ်စရာ ရောဂါပါ
It can completely change
ဒါက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို
making them paranoid and even violent.
My dad's been sick foradecade,
အဖေ နေမကောင်းတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု ကြာပြီ၊
but three years ago he got really sick,
ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်က တကယ်
and we had to move him out of his house --
ကျွန်မတို့ သူ့ကို အိမ်ထဲကနေ
the house that I grew up in,
ကျွန်မ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ အိမ်၊
the house that he built
သူ့လက်တွေနဲ့ သူဆောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်ပါ။
My strapping, cool dad
with the falsetto singing voice
အသံမြင့်တဲ့ သီချင်းဆိုတဲ့ အသံနဲ့
ကျွန်မရဲ့ ထွားကျိုင်းပြီး အေးဆေးတဲ့ အဖေဟာ
had to move intoafacility
for round-the-clock care
သူ့အသက် ၆၅ နှစ်မှာပဲ
၂၄ နာရီ အထောက်အပံ့ ရယူသူဆီကို
At first my mom and sisters
ပထမ အမေ၊ အမတွေနဲ့ ကျွန်မ
သူ့ကို ပုံမှန် ပြုစုရေး ဂေဟာမှာ
of putting him inaregular nursing home.
It was really pretty;
ဒါက အတော် လှပပါတယ်။
it had plush carpet
and afternoon art classes
andadog named Diane.
Diane ဆိုတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။
နောက်​ ကျွန်မကို ဖုန်းဆက်တယ်
"Ms. Malone ရှင့်အဖေကို ကျွန်မတို့
"Well, he threatened
everybody with cutlery.
"ဟုတ်ကဲ့၊ သူက ခက်ရင်းတွေ၊ ဓားတွေနဲ့
And then he yanked
the curtains off the wall,
to throw plants out the window.
And then, well, he pulled all
the old ladies out of their wheelchairs."
နောက်ပြီး အင်း အဖွားအိုတွေအားလုံးကို
After he got kicked out of there,
အဲဒီကနေ အဖေ မောင်းထုတ်ခံရအပြီးမှာ
we bounced him between
a bunch of state-run facilities
အထူးသဖြင့် ဦးနှောက် ထိခိုက်မှု
before findingatreatment center
specifically for people with dementia.
ကုသ ဌာန မတွေ့ခင် သူ့ကို အစိုးရကဖွင့်တဲ့
အထောက်အပံ့အစု အကြား အတင်းထားခဲ့တယ်။
At first, he kind of liked it,
but over time his health declined,
and one day I walked in
တစ်နေ့ ကျွန်မ ဝင်သွာတော့
and found him sitting hunched over
on the ground wearingaonesie --
မြေပြင်မှာ ကုန်းထိုင်နေတာ တွေ့ရတယ်၊
those kinds of outfits
that zip in the back.
ကျောမှာ ဇစ်ပါတဲ့ ဝတ်စုံ မျိုးတွေပါ။
I watched him for about an hour
as he yanked at it,
တစ်နာရီလောက် သူ့ကို စောင့်ကြည့်စဉ်
သူက အဲဒါကို ဖယ်ပြီး
trying to findaway out of this thing.
And it's supposed to be practical,
but to me it looked likeastraightjacket.
ကျွန်မအတွက်တော့ အချုပ်သားအကျီနဲ့ တူနေတယ်။
And so I ran out.
ဒါနဲ့ ကျွန်မ ပြေးသွာပြီး
အဲဒီကနေ သူ့ကို ထုတ်ခဲ့တယ်။
I sat in my truck -- his old truck --
ကျွန်မ ကုန်ကားထဲ ဝင်ထိုင်တယ်
this really deep guttural cry
coming out of the pit of my belly.
ဒါက ကျွန်မရဲ့ ဝမ်းခေါင်းကနေလာတဲ့
တကယ် စို့နင့်တဲ့ ငိုကြွေးမှုပါ။
I just couldn't believe that my father,
ဒါဟာ ကျွန်မအဖေလို့တောင် မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။
the Adonis of my youth,
my really dear friend,
ကျွန်မရဲ့ တကယ့် ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေဟာ
would think that this kind of life
was worth living anymore.
to prioritize productivity.
ကျွန်မတို့ဟာ ဖြစ်ထွန်းမှုကို ဦးစားပေးဖို့
So whenaperson --
an Adonis in this case --
is no longer productive
in the way we expect him to be,
the way that he expects himself to be,
what value does that life have left?
ဒီဘဝမှာ ဘာတန်ဖိုးများ ကျန်သေးလဲ။
That day in the truck,
all I could imagine
was that my dad was being tortured
and his body was
the vessel of that torture.
သူ့ခန္ဓာက ဒီနှိပ်စက်မှုရဲ့ ဖျဉ်းအိုးပဲ
I've got to get him out of that body.
သူ့ကို ဒီခန္ဓာထဲက ထုတ်ဖို့လိုတယ်။
I've got to get him out of that body;
သူ့ကို ဒီကိုယ်ထဲက ထုတ်ဖို့လိုတယ်။
အဖေ့ကို ကျွန်မ သတ်တော့မယ်။
"Beth," she said.
to live the rest of your life
နင့်အဖေကို နင်သတ်တယ်လို့ သိပြီး
knowing that you killed your father.
And you'd be arrested I think,
နင်တော့ အဖမ်းခံရမယ်လို့ ထင်တယ်။
because he can't condone it.
ဘာလို့ဆို သူ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး၊
how to buy heroin."
နင်က ဘယ်လို ဟီးရိုးအင်း ဝယ်ရမှာတောင်
မှန်တယ်၊ ကျွန်မ မသိဘူးလေ။
The truth is we talk
about his deathalot.
မှန်တာက သူ့ သေဆုံးမှုကို
When will it happen? What will it be like?
ဘယ်တော့ ဖြစ်မလဲ၊ ဘယ်လိုများ ဖြစ်မလဲ။
But I wish that we would have talked
about death when we were all healthy.
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ကျန်းမာစဉ် သေခြင်း
အကြောင်း အများကြီး ပြောဖြစ်စေချင်တာပါ။
What does my best death look like?
ကျွန်မရဲ့ အကောင်းဆုံး သေဆုံးမှုက
What does your best death look like?
သင်တို့ အကောင်းဆုံး သေဆုံးမှုက ဘယ်ပုံလဲ။
But my family didn't know to do that.
And my sister was right.
ကျွန်မ အမပြောတာ မှန်ပါတယ်။
I shouldn't murder Dad with heroin,
အဖေ့ကို ဟီးရိုးအင်းနဲ့ မသတ်သင့်ပေမဲ့
but I've got to get him out of that body.
သူ့ကို ဒီကိုယ်ထဲက ထုတ်ပစ်ဖို့လိုတယ်။
And thenapriest,
and thenasupport group,
နောက် အားပေးတဲ့ အဖွဲ့၊
and they all said the same thing:
sometimes people hang on
when they're worried about loved ones.
တစ်ခါတစ်ခါ လူတွေဟာ သူတို့ချစ်ရသူတွေကို
Just tell them you're safe,
and it's OK to go when you're ready.
ဖြစ်ချိန်မှာ သွားဖို့ အဆင်ပြေတယ်
So I went to see Dad.
ဒါနဲ့ အဖေ့ကို သွားတွေ့တယ်
I found him hunched over
on the ground in the onesie.
မြေပြင်မှာ ကုန်းနေတာ တွေ့တယ်။
He was staring past me
and just kind of looking at the ground.
I gave himaginger ale
သူ့ကို ချင်း ဘိလပ်ရည်တိုက်
and just started talking
but as I was talking,
he sneezed from the ginger ale.
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ စကားပြောနေစဉ်မှာ
ချင်း ဘိလပ်ရည်ကြောင့် သူနှာချေတယ်၊
And the sneeze --
it jerked his body upright,
သူ့ကိုယ်ကို ဆတ်ကနဲ မတ်သွားစေတယ်၊
sparking him back to lifealittle bit.
And he just kept drinking and sneezing
and sparking, over and over and over again
ဒါက အရမ်းကို ထူးကဲပါတယ်။
This is so fabulous."
သူ ကျွန်မကို ကြည့်နေတယ်။
and I said, "Hi, Dad!"
and he said, "Hiya, Beth."
သူက "ဟေး၊ Beth"
And I opened my mouth to tell him, right?
ကျွန်မ ပြောပြဖို့ ပါးစပ်ဖွင့်လိုက်ကာ
"Dad, if you want to die, you can die.
"အဖေ၊ သေချင်ရင်၊ သေနိုင်တယ်၊ ကျွန်မတို့
But as I opened my mouth to tell him,
ဒါပေမဲ့ ပြောပြဖို့ ပါးစပ်ဖွင့်ခိုက်မှာ
all I could say was, "Dad!
And then he said, "Well, I miss you, too."
ဒီနောက် သူပြောတာက "အဖေလည်း
And then I just fell over
because I'm justamess.
ဒီနောက် ကျွန်မ လဲကျသွားတယ်၊
အကြောင်းက ကျွန်မက ကမောက်ကမလေ။
So I fell over and I sat there with him
ဒါနဲ့ ကျွန်မ လဲကျပြီး အဲဒီမှာ
he seemed kind of OK.
အကြောင်းက အကြာကြီးနေပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်
And I memorized his hands,
feeling so grateful that his spirit
was still attached to his body.
သူ့ရဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ တွဲနေသေးတာကို
အဲဒီအခိုက်မှာ ကျွန်မ သဘောပေါက်ခဲ့တာက
I'm not responsible for this person.
ကျွန်မဟာ ဒီလူအတွက် တာဝန်မရှိဘူး၊
I'm not his doctor,
I'm not his mother,
I'm certainly not his God,
သူ့ရဲ့ ဘုရားသခင်မဟုတ်တာ မုချပဲဖြစ်ပြီး
and maybe the best way to help him and me
သူနဲ့ ကျွန်မကို ကူညီဖို့ အကောင်းဆုံး
is to resume our roles
as father and daughter.
ဖခင်နဲ့ သမီးဆိုတဲ့ ကဏ္ဍတွေကို
And so we just sat there,
ဒါနဲ့ အဲဒီမှာ ထိုင်ခဲ့ကြတယ်
calm and quiet like we've always done.
Nobody was productive.
Both of us are still strong.
ကျွန်မတို့ နှစ်ဦးလုံး သန်မာဆဲပဲ
"OK, Dad. I'm going to go,
but I'll see you tomorrow."
ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန် တွေ့မယ်။
this isapretty nice hacienda."
ဒါက အတော် ကောင်းတဲ့ အိမ်ခြံဝင်းတစ်ခုပဲ၊
Beth Malone: အဖေ့ရဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရောဂါက ကျွန်မရဲ့ မရဏ (နှင့်ဘဝ)​ အတွေးအခေါ်ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပုံ။ | TED Talk | TED.com